Kicheni ane showcases: yako crockery pakuona | Bezzia
Maria vazquez | 20/06/2022 20:00 | Tricks kushongedza
Uri kuzogadzirisa kicheni yako munguva pfupi? makicheni ane makabati izvo zvatinokurudzira zvichakukurudzira! Makabati ekuratidzira anowedzera kunaka kukicheni uye akanakira kuratidza midziyo nezvimwe zvidimbu zvakanaka zvaunoda kuti munhu wese aone.
Asi iyo haisi iyo yega mukana wekubatanidza makabati mukicheni dhizaini. Izvi zvinogadzira kicheni inoita seyakareruka, chinhu chatinogona kushandisa kuita kuti makicheni madiki kana akasviba awedzere kunaka. Uri kutanga kufarira zano rekubheja mukicheni ine showcases?
Tataura kuti makabati anowedzera hunhu kukicheni. Elegance futi. Uye izvo, zvakare, kana isu tikatsiva yakavharwa uye opaque ekuchengetedza mhinduro neizvi, isu tinowana inooneka yakareruka nzvimbo. Ichokwadi kuti kuitira kuti kubatanidzwa kwavo kurege kukanganisa, kunofanira kuchengetedzwa, asi kunoratidzika kwatiri kuduku zvikuru asi kuenzaniswa ne zvese zvakanakira zvemakicheni ane makabati.
Kana iwe uchitova nechokwadi chekuwedzera imwe showcase kune yako kicheni purojekiti, iwe unongofanira kusarudza kuti unozviita sei. Uye ndezvekuti iwe unogona kubatanidza mashowcases kune dhizaini nenzira dzakawanda uye isu tatotarisira kuti hapana ari nani pane mumwe.
1 Makabati ekumusoro ane showcase
2 vertical showcases
3 Dzimwe nzira
Makabati ekumusoro ane showcase
Iyi ingangove ndiyo inonyanya kufarirwa sarudzo: chinja magonhi emamwe makabati epamusoro nemagirazi kuti uwane nzvimbo uye chiedza. Nenzira iyi kicheni ichaita seyakareruka uye zvinhu zvaunochengeta mazviri zvichadzivirirwa kubva kuguruva kana girisi.
Pfungwa yakapusa yaunogona kutamba nayo kuti uwane mamwe anoyevedza uye ega madhizaini. Sei? Kushandisa a Zvinhu zvakasiyana-siyana zvekuratidzira izvo zvinovaita kuti vamire kunze kwemamwe makabati uye nekuvhenekera mukati mavo kuti vatarise kune zviri mukati mavo.
Iwe unogona kunge uri kushamisika kuti tinorevei nema vertical showcases. Zvakanaka, havasi vamwe kunze kweavo vanogara zvachose pasi kusvika padenga module. Izvo zvinoshamisa munzvimbo iyo iyo makabati anotevera mumwe kune mumwe kuputsa neaesthetics yemadziro uye nekurerutsa.
Haasi ese ekuratidzira anofanirwa kuve modular uye akabatanidzwa mufenicha; iwe unogona zvakare kuibatanidza mukicheni yakasununguka fenicha sezvinoratidzwa kurudyi mumufananidzo uri pamusoro. Kana ukavaisa pedyo netafura yekicheni ivo vanozove vanonyanya kushanda pakugadzirisa tafura.
Zvakawanda zvakadii zviri nani? Funga nezvezvaunoda kuratidza uye uzvimisire iwe kune showcase inogona kugarisa izvo zvinhu. Sezvatakambotaura kurongeka kwakakosha kuitira kuti zviratidziro izvi zvipenye uye kukura kwacho, ndiko kunyanya kuoma kurichengeta. Iwe haugone kufungidzira mhedzisiro yemhirizhonga iyo yakaunganidzwa uye yakashata showcase inokonzeresa mukicheni.
Mamiriro atotaurwa ndiwo akajairika asi kune akawanda akawanda! Uye ndezvekuti mashowcases anogona kubatanidzwa mune chero chidimbu chefenicha. Uye tichitaura nezve fenicha, mamwe edu atinoda ndeaya anobatanidza opaque magonhi munzvimbo yepasi nemagirazi magonhi ekumusoro maviri muzvitatu. Iwo zvidimbu zvefenicha zvinopenya kunyanya munzvimbo dzakakura umo imba yekudyira inogovera imba nekicheni. Unodzifarira here?
Rudzi urwu rwekuratidzira harufanire kuve, nekuwedzera, kudzika kwakawanda, zvakakosha kuchengetedza zvimwe ndiro. uye kushaiwa imwe nzvimbo yekuchengetedza iwe unogona nguva dzose kuwedzera kudzika, kana uchida, kwekabati rezasi. Mumifananidzo unogona kuona mienzaniso yemarudzi ese ayo tine chokwadi chekuti uchada.
Unoda makicheni ane showcases? Yeuka kuti kana iwe uchida kukwevera kutarisa kune showcase, ruvara rwakasiyana neruremekedzo kune imwe fenicha ichabatsira. Kana, kune rumwe rutivi, iwe uchida kuti kabhineti ibatanidzwe mairi, iyo yakanaka ndeyekuremekedza magumo akafanana uye mavara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Tricks kushongedza » Kicheni ane showcases: yako crockery pakuona
Ngano dzerudo rwerudo